Miyuu Sadio Mane Taam Buuxa U Yahay Inuu Caawa Chelsea Wajaho Kaddib DAAL Badan? Isaga Qudhiisa Ayaa Jawaab Ka Bixiyay. - Gool24.Net
Miyuu Sadio Mane Taam Buuxa U Yahay Inuu Caawa Chelsea Wajaho Kaddib DAAL Badan? Isaga Qudhiisa Ayaa Jawaab Ka Bixiyay.
Garabka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa ka hadlay fursadiisa kasoo muuqasho ee kulanka ay caawa kooxdiisu wajahi doonto dhigeeda Liverpool Final-ka tartanka UEFA Super Cup.
Mane ayaa Isniintii hore kusoo laabtay tababarka kooxdiisa Liverpool isaga oo soo qaatay fasax 16 maalmood ah kaddib markii uu Final-kii tartanka qaramada Afrika la gaadhay dalkiisa Senegal oo guuldarro 1-0 ah kala kulmay xulka Algeria.
Mane ayaa gabi ahaanba seegay kulamadii ka horreeyay xilli ciyaareedka ee ay Liverpool soo ciyaartay iyo xataa kulankii Community Shield-ka ee ay guuldarrada gool kulaadyada ah kala kulantay Manchester City.
Ugu dambayn, 27 jirkan ayaa bedel kusoo galay kulankii ay kooxdiisu guusha ku furatay xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League isaga oo 16 daqiiqo ka ciyaaray si uu wakhti ciyaareed u helo kahor kulanka Chelsea.
Haddaba, Sadio ayaa sheegay inuu si buuxda diyaar ugu yahay kulankaas isaga oo sheegay inuu mudo toddoba sano ahba uusan helin fasax ka badan 20 maalmood isla markaana uu lasoo qabsaday fasaxyada yar.
Mane ayaa yidhi “Waxaan filayaa inaan diyaar ahay, Daalku waxaan u malaynayaa inuu halkan yahay (Isaga oo farta ku fiiqaya madaxiisa)”.
“Hubaashii anigu waxaan ciyaarayay mudo dheer, Uma malaynayo inaan helay fasax ka badan 20 maalmood mudo toddoba sano ah, Anigu waan samayn jiray sidan, Hubaashii diyaar ayaan ahay, Halkan ayaan joogaa, Aynu samayno”.